China waterproof IP44 3w 6w 9w 12w 18w 24w flat LED panel oriọna recessed gburugburu ultra thin slim led uko ụlọ ọkụ ndị na-emepụta na suppliers | Kasem
waterproof IP44 3w 6w 9w 12w 18w 24w flat led panel oriọna recessed okirikiri ultra thin slim led uko ụlọ ọkụ.
Okpomọkụ agba (CCT): 2700 ~ 6500k, 2700 ~ 6500k
Nrụpụta ọkụ oriọna (lm/w): 80
Ụdị imewe: Oge a
Igwe ọkụ na-egbuke egbuke (lm): 240
Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃): -15 - 45
Ihe eji arụ oriọna: ABS
Ọkwa IP: IP44
Asambodo: CCC, ce, RoHS, Saa, SASO, VDE
Aha ngwaahịa: LED panel ìhè
Isi iyi ọkụ: LED SMD
Isi mmalite ọkụ LED: SMD2835
Ntinye voltaji: AC85-265V
Igwe ọkụ LED: Epistar
Ike: 3w 6w 9w 12w 18w 24w
• Enweghị nnyonye anya RF, ọkụ na-egbuke egbuke ma dị nro, nwere ike ichekwa anya na ụbụrụ gị. Voltaji ntinye: AC 85V ~ 265V. Ọ bụghị dimmable.
• Ultra thin design, panel ìhè kpọmkwem agbakwunyere n'uko, na-eme ka uko ụlọ dị larịị. Nrụnye dị mfe, enwere ike ịkwado ya n'ụzọ dị mfe kama ọkụ ọkụ nkịtị.
• Scientific shei imewe. Lens LED Frosted, mgbochi ncha ọkụ na ọkọ na-eguzogide ọgwụ. Ụlọ aluminom na-agba agba na-eme ka nguzogide corrosion na ikpo ọkụ dị mma.
• Enyi na gburugburu ebe obibi, obere okpomọkụ, enweghị IR ma ọ bụ UV radieshon, obere ike oriri, nchekwa ike. Ọnụ ego mmezi dị ala. 50000 awa nkezi ogologo ndụ na-ebelata re-oriọna ugboro ma chekwaa mgbalị gị iji dochie ọkụ.
• Nnukwu ngwa ngwa: zuru oke maka mgbidi, elu ụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ, ụlọ wdg. ịchọ mma na ọkụ.
Iji malite ịwụnye ọkụ ọkụ ọkụ, enwere usoro ole na ole ị kwesịrị ịgbaso:
1) Kpebie nhazi nke ọkụ gị ma kaa akara ebe ọkụ ọ bụla dị n'elu ụlọ gị.
2) Gbaa wires na ebe ọkụ ọ bụla dị.
3) Bee oghere n'elu ụlọ gị nke dabara nha akwadoro na ibe ngwaahịa.
4) Mee njikọ waya gị wee gbanye ọkụ n'ime ebe.
Na-ekpebi nhazi maka ọkụ gị
Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ọkụ ha n'otu aka ahụ pụọ na ibe ha na-akpụ ụkpụrụ grid n'elu ụlọ. Ebe dị anya n'etiti ọkụ ọ bụla na-adaberekarị na ọkụ ọkụ LED nke ìhè gị. Nke a bụ iwu isi mkpịsị aka ole na ole maka oghere mgbe ị na-eji ọkụ dị ka ọkụ mbụ (ọ bụrụ na ị na-eji ọkụ dị ka ụda olu ma ọ bụ na ị nwere ọkụ ndị ọzọ n'ime ụlọ gị, ị nwere ike kewaa ha iche):
7W LED Fixtures (nke dabara na bọlbụ ọkọlọtọ 50W): A na-edobe ihe ndozi 7W na grid nke na ha dị 2'-3' na mgbidi ọ bụla na 4-5' iche na ibe ha.
9W LED Fixtures (nke dabara na bọlbụ ọkọlọtọ 65W): A na-edobe ihe ndozi 9W na grid nke na ha dị 3' n'akụkụ mgbidi ọ bụla yana 5-6’ iche na ibe ha.
15W LED fixtures (nke kwekọrọ na ọkọlọtọ ọkọlọtọ 75-80W): A na-edobe ihe ndozi 15W na grid nke na ha dị ihe dịka 4-5 'na mgbidi nke ọ bụla na ihe dị ka 6-7' iche na ibe ha.
18W LED fixtures (nke kwekọrọ na ọkọlọtọ ọkọlọtọ 125W): A na-edobe ihe ndozi 18W na grid nke na ha dị 5-6 'na mgbidi nke ọ bụla na ihe dịka 8-10' iche na ibe ha.
Kedu ka esi ahọrọ agba ọkụ?
3000K: A na-eji ezinụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa kọfị na ebe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ ma dị ụtọ chọrọ.
4500K: A na-eji ya n'ụlọ ebe achọrọ ikuku ọkụ dị nro.
6000K: A na-eji ya n'ọfịs, ebe a na-arụ ọrụ, nnukwu ụlọ ahịa na mpaghara azụmahịa ndị ọzọ ma ọ bụ ebe ọ dị mkpa na-egbuke egbuke.
Dimmable & Arụmọrụ dị elu:Ihe nrụnye ọkụ na-agbago na-abịa na 10% - 100% Smooth triac dimming, dakọtara na ọtụtụ dimmers LED na ahịa North America. Ọkụ na-egbukepụ egbukepụ nke ukwuu, enweghị ọkụ ọkụ na humming, ezigbo nchebe maka anya. Ịchekwa ike ruo 80% na oriri ume ma e jiri ya tụnyere oriọna incandescent ọdịnala.
Ọkpụrụkpụ Dị Mkpa:Ọkpụrụkpụ ọkụ a gbanarị agbagọ bụ naanị 1 cm, ya na ọkpụrụkpụ nke ekwentị Apple 1. Jiri mgbanaka ọkụ a na-agbanye n'uko ụlọ na-enye ya ọmarịcha anya.
Nke gara aga: ada ìhè maka ubi
Osote: Nzọụkwụ 3 LED kwadoro anyanwụ na-enwu ọkụ n'èzí igwe anaghị agba nchara maka nzọụkwụ nzọụkwụ Patio stair Auto Onoff
elu led panel ìhè 18w 12w na gburugburu alum ...